Top 10 nồi nấu bột cho bé chất lượng, tiện ích nhất cho các mẹ 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 nồi nấu bột cho bé chất lượng, tiện ích nhất cho các mẹ 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Uma udaba lokudla kwezingane lugxile kakhulu komama, ukukhetha umshini wokupheka ufulawa ukuze kuqinisekiswe izinga kanjalo nokuphepha kwezempilo kubhekwe kakhulu. Ikakhulukazi emakethe namuhla, kunemikhiqizo eminingi umpheki kafulawa, umkhiqizo ngamunye unenzuzo ehlukile, usayizi kanye nentengo. Ngakho-ke, ukuze ukhethe umkhiqizo ofanele, uqinisekise ukuphepha nokusetshenziswa okuqinile, kufanele ufunde ngokucophelela nangokucophelela.
Esihlokweni esingezansi, ngizokwethula abapheki bempushana bezingane abayi-10 abahamba phambili namuhla.
1 Yini umpheki wenhlama?
1.1 1. I-Sunhouse SHG-MP14
1.2 2. I-kangaroo powder cooker
1.3 3. Umpheki kafulawa
1.4 4. Umpheki kafulawa we-ELMICH
1.5 5. GreenCook ufulawa cooker
1.6 6. IZINKANYEZI EZINHLANU Zokupheka Ufulawa
1.7 7. I-Royal Dough Cooker
1.8 8. LocknLock Decore Flour Cooker
1.9 9. Happycook inhlama cooker
1.10 10. 304. Umpheki Wenhlama Yensimbi Engagqwali
Yini umpheki wenhlama?
Umpheki kafulawa uyinto ebalulekile ehlakaniphile futhi elula uma unesidingo sokulungiselela ukudla kwezingane ukuze ulunyuliswe. Ngenxa yokuthi ibhodwe lokupheka lenziwe ngezinto eziphephile futhi ezihlala njalo, lisiza ukupheka ngokushesha, ukugcina ukudla ngokuhambisana nezindinganiso zokunambitheka, nokuqinisekisa ikhwalithi yokudla okunomsoco. Ngakho-ke, ukuze ukudla kwezingane kube mnandi futhi kuphephe, kuyadingeka ukusebenzisa izitsha zokupheka ezifana nabapheki befulawa.
Ngaphandle kwalokho, umpheki kafulawa naye uklanywe ngosayizi ohlangene, onesivalo sengilazi esiwugqinsi, ukuze umkhiqizo ukwazi ukumelana nokushisa kahle. Akugcini lapho, umpheki kafulawa wakhiwe futhi waba nembobo yomoya ukukusiza ukuthi ubone ukudla okungaphakathi ngaphandle kokuthi uvule isivalo. Ngakho-ke, ukuze uqinisekise ukudla okumnandi nokuphephile kwengane yakho, kufanele usebenzise lesi sipheki sikafulawa esikhethekile ngokushesha.
1. I-Sunhouse SHG-MP14
Kusetshenziswa ingxubevange ye-aluminium engagxili yekhwalithi ephezulu, ukumelana nokushisa okuhle, ukudluliswa kokushisa okusheshayo, ngisho nokuqhutshwa kokushisa.
Isivalo senziwe ngengilazi ekwazi ukumelana nokushisa, sinembobo yokukhipha umoya, nesibambo esikahle.
Ibhodwe lifanele ukupheka i-powder baby noma ukupheka ama-noodle, imifino ebilisiwe, isobho sokupheka ngamanani amancane.
Ibhodwe lokupheka eliyimpuphu ye-sunhouse lakhiwe ngezinto ze-aluminium alloy ehlanganiswe nobuchwepheshe be-Anodization ukuze yenze umkhiqizo uhlale isikhathi eside, ungabi ne-oxidized naphezu kokusetshenziswa isikhathi eside.
Isici esivelele se-cooker kafulawa ukuthi yonga isikhathi sokupheka futhi igcina ukushisa isikhathi eside ngenxa yekhwalithi ephezulu ye-aluminium esiza ukuqoqa ukushisa ngokushesha nokusabalalisa ukushisa ngokulinganayo.
Ngaphandle kwalokho, i-Sunhouse nayo inezinzuzo eziningi ezifana nesivalo senziwe ngengilazi engu-5mm ewugqinsi ekwazi ukumelana nokushisa; izibambo, amafindo angeniswa evela eKorea, enziwe ngezinto zepulasitiki ezingashisi ukumelana nokushisa lapho zisetshenziswa.
Ayisetshenziswa ngabapheki bokungenisa
2. I-kangaroo powder cooker
Inenamathela engelona induku ephephe ngokuphelele
Isibambo senziwe ngepulasitiki eqinile
Isendlalelo esingezansi sinamandla okuqhuba ukushisa nokusabalalisa ukushisa ngokulinganayo
Ibhodwe lenziwe nge-alloy material embozwe ngemabula, ngakho-ke kuphephe kakhulu ukuyisebenzisa. Nge-coat ephephile ngokuphelele engagcini, ungakwazi ukupheka izitsha ezimnandi ngamafutha amancane kakhulu.
Ingaphandle lebhodwe limbozwe ngopende ongashisi, ngakho-ke i-pan ayishisi noma ishintshe umbala, ikhulise ukuqina komkhiqizo.
Isivalo sebhodwe senziwe ngengilazi ekwazi ukumelana nokushisa, enesibambo sepulasitiki esiphephile.
Ibhodwe elinobubanzi obungu-16cm lifanele ukupheka inhlama, ukufudumala ubisi noma ukupheka izitsha zabantu abambalwa.
Ibhodwe linesibambo esenziwe ngepulasitiki eqinile futhi alikudluliseli ukushisa, okwenza kube lula ukulibamba, kube lula lapho uhambisa ibhodwe, iqinisekisa ukuphepha ngesikhathi sokupheka.
Isendlalelo esingezansi sebhodwe sinamandla okuqhuba ukushisa nokusabalalisa ukushisa ngokulinganayo, ukuze ukudla kuphekwe ngokushesha futhi kukulondoloze isikhathi nophethiloli.
Ibhodwe limbozwe nge-non-stick coating, enganamatheli kugrisi nokungcola, okwenza kube lula ukuyihlanza. Ngemuva kokusebenzisa, udinga nje ukugeza ngobumnene ibhodwe lihlanzeke njengokusha.
3. Umpheki kafulawa
I-Soft oxidation ephathwa nge-aluminium alloy material
Ibhodwe lenziwe ngezinto eziwugqinsi ze-aluminium alloy, eziqhuba ukushisa ngokushesha futhi zisabalalise ukushisa ngokulinganayo.
Inqubo ye-oxidation ethambile ngokobuchwepheshe obuphambili bamazwe ngamazwe, yenza izendlalelo ezi-3 eziqinile, azikho monakalo empilweni yabasebenzisi.
Isibambo sepulasitiki esivalekile nesivalo, ukubamba kalula.
I-Supor powder cooker yenziwa ngokobuchwepheshe obuthuthukisiwe baseYurophu futhi yakhelwe ngokukhethekile ukulungiselela izingane ukudla.
Ibhodwe lisetshenziswa i-high-grade oxidized aluminium alloy material, umkhiqizo usetshenziswa ubuchwepheshe besimanje ukuqinisekisa ukuthi awugqwali futhi unokumunca kahle ukushisa, awusizi nje ukupheka ukudla ngokushesha kodwa futhi uvikela impilo. Omama bangapheka uphuthu ngokuphephile, bagovuze ufulawa, ubisi olufudumele, futhi balungiselele ukudla kwezingane ngamabhodwe e-Supor namapani.
Ibhodwe le-Supor liklanywe ngesivalo esiqinile, esiza ukugcina ukushisa kahle kanye ne-flavour yokudla isikhathi eside. Ikakhulukazi, isembozo sebhodwe senziwa ngengilazi esobala, okukuvumela ukuba ubone kalula ukudla okungaphakathi ngenkathi upheka.
Umkhiqizo ufakwe isibambo nesivalo esenziwe ngepulasitiki yokwenziwa evikela ukushisa, okwenza kube lula ukubamba nokuhambisa ibhodwe ngaphandle kokukhathazeka ngokusha.
4. Umpheki kafulawa we-ELMICH
Ibhodwe lokupheka likafulawa we-Elmich lenziwe nge-aluminium alloy material, linesendlalelo se-porcelain esinganamatheli ngokuphelele ezithakweni zemvelo, eziphephe kakhulu.
Ukumelana nokushisa kuze kufike ku-250 degrees Celsius, akukhiphi amagciwane.
Ingaphandle limbozwe nge-ceramic coating ukuvimbela amabala, kulula futhi kulula ukuwahlanza.
I-Elmich powder yokupheka ibhodwe lenziwe ngezinto ze-aluminium alloy, kusetshenziswa ubuchwepheshe obuphambili kakhulu be-Ecolon obungagxili namuhla onongqimba olungenanduku lwezithako zemvelo ngokuphelele: impushana yamatshe, ubumba olucolekile nezinye izinhlanganisela zemvelo, ngakho kuphephe ngokuphelele empilweni yabasebenzisi. .
Ayikhiphi i-PFOA ye-carcinogenic, imelana nokushisa kufika ku-250 degrees Celsius.
Ibhodwe lenziwe ngekheji elijulile elinobubanzi obungu-16cm, okwenza kube lula ukucubungula izitsha ezifana nophuthu, isobho noma impushana yengane.
Ingaphandle lebhodwe limbozwe nge-ceramic anti-fouling okulula ukuyihlanza ngemva kokusetshenziswa ngakunye.
Isibambo se-silicone esingavimbeli ukushisa neknobhu kuphephile futhi kulula ukukusebenzisa.
Ingasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zezitofu: i-induction cooker, isitofu segesi, isitofu sikagesi, i-galogen…
5. GreenCook ufulawa cooker
Idizayini encane, elula.
Ngaphansi kwebhodwe kunokuthungwa okungahambisani nokushelela.
Izinto ezisezingeni eliphakeme, ukwakheka okuhle nokuphephile.
Ibhodwe limbozwe ngetshe elinganamatheli ezinhlangothini zombili ngobuchwepheshe obusha ngokuphelele base-Europe, okwenza kube nzima ukunwaya indawo engaphezulu, ukungagxili, okuphephile empilweni.
Ibhodwe lenziwe ngengxube ye-aluminium yezinga eliphezulu, eqhuba ukushisa ngokushesha futhi ikhiphe ukushisa ukuze yonge isikhathi sokupheka nophethiloli.
Ngaphansi kwebhodwe kunephethini engasheleli, evimbela ibhodwe ukuthi lingasheleli esitofini, liphephe nakakhulu ekuphekeni.
Isibambo sifakwe okusanhlamvu ngokhuni, nombala wetshe omuhle ofanayo.
Isivalo sengilazi esishisayo esinephinifa lokusanhlamvu ngokhuni, nesibambo esivalekile sokhuni okusanhlamvu, kuphephile ukusebenzisa.
6. IZINKANYEZI EZINHLANU Zokupheka Ufulawa
I-Fivestar flour cooker iqoqa ukushisa ngokushesha, isakaza ukushisa ngokulinganayo nangokuphepha.
Ibhodwe le-Fivestar alinamatheli noma alishisi inhlama ukuze ukwazi ukuyishisa kabusha izikhathi eziningi.
Ingasetshenziselwa ukupheka, ukudla isitshulu ngamanani amancane ezinganeni lapho zifunda ukudla.
Ibhodwe lenziwe ngensimbi engagqwali engu-430 ecwebezelayo, ihlala isikhathi eside, kulula ukuyihlanza, ayinawo oksijini, iphephile empilweni, isikhathi eside ukuyisebenzisa.
Imbiza yensimbi engagqwali ewugqinsi, ihlala isikhathi eside, yinhle.
Iphansi elinezendlalelo ezi-3 ebhodweni likhipha ukushisa ngokulinganayo, liqinisekisa ukuthi alidatshulwa, ligcina ukushisa isikhathi eside.
Ibhodwe lingasetshenziswa ezitofini ze-infrared, izitofu zegesi kanye nezitofu zokungeniswa.
Isivalo senziwe ngengilazi ekhanyelayo, kulula ukubona ukudla ngaphakathi futhi kulula ukusihlanza ngemva kokusetshenziswa.
Isibambo siqinile, side, kulula ukusibamba.
7. I-Royal Dough Cooker
Ukumelana nokushisa, kulula ukubona ukudla ngaphakathi
Inokumelana okuhle kakhulu nokugqwala noma i-oxidation.
Iphephile, azikho izinto eziyingozi.
Idizayini ehlangene, kulula ukuyibamba.
Isivalo senziwe ngengilazi esobala, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukubona kalula ukudla ngaphakathi futhi kulula ukukuhlanza ngemva kokusetshenziswa.
Yenziwe ngensimbi engagqwali yekhwalithi ephezulu, i-anti-rust, non-oxidizing, anti-corrosion, ayisebenzi ngokudla, iqinisekisa ukuphepha kokudla, ingasetshenziselwa abapheki bokungenisa.
Isibambo siqinile, side, simbozwe ngepulasitiki engashi, ukumelana nomlilo.
Idizayini enhle, icocekile, kulula ukuyisebenzisa futhi ihlanzekile.
Imikhiqizo ibhaliswe ukuze ihlolwe izinga lokuhlanzeka kokudla kanye nokuphepha
8. LocknLock Decore Flour Cooker
Isipheki sikafulawa we-LocknLock senziwe ngezinto ezingezona izinduku zekhwalithi ephezulu.
Ikhono elihle lokudlulisa ukushisa.
Ayinazo izinto eziyingozi, eziphephile ukuthi zisetshenziswe.
Yenziwe ngezinto eziphephile ezingenazo izinhlanganisela ezine-perfluorinated ukuqinisekisa ukuphepha kwezempilo
Umzimba we-aluminium ngaphakathi wembozwe nge-porcelain engeyona induku yekhwalithi ephezulu, kanti ngaphandle umbozwe ngopende ongashisi ukushisa.
Ikhono eliphelele elinganamatheli (i-nonstick) elinoqweqwe oluphephile lwe-porcelain olungaqukethe i-PFOA, ngakho-ke alinamatheli ekudleni.
Idizayini yokuthulula elula lapho wenza amasoso noma ubisi lwezingane yenza kube lula ukuthulula.
9. Happycook inhlama cooker
Ibhodwe linendawo ejulile, akukho oxidation, akukho ukugqwala, kuphephe kakhulu futhi kulula.
Inamandla okuqhuba ukushisa ngokushesha nangokulinganayo, ngakho ayibangeli ukushisa kokudla.
Isikhathi sokupheka siyashesha kunezinye izinhlobo zamabhodwe.
Ibhodwe le-aluminium alloy alizikhathazi ngokugoba okuphansi njengebhodwe lensimbi engagqwali.
Udonga lwebhodwe elingu-3mm lumelana nomthelela ngaphandle kokwesaba umonakalo noma ukuhlanekezela.
I-aluminium alloy iyinto eqinile kakhulu, imelana namandla amakhulu omthelela, ngaphezu kwalokho, ayifaki i-oxidize noma ukugqwala njengensimbi nensimbi, isisindo esincane.
Ibhola le-aluminium alloy liqhuba ukushisa ngokushesha, linikeza ukushisa okufanayo, okwenza ubisi nofulawa kuphekwe ngokulinganayo futhi kungashi phansi.
Indwangu yamatshe imelana nokushisa okuphezulu kakhulu ngaphandle kokucwecwa, futhi kulula ukuyihlanza.
Indawo engaphakathi ehlanganiswe ngezinti ezisezingeni eliphezulu, kulula ukuyipheka futhi iyihlanze.
Isivalo sisebenzisa ingilazi eqinile eqinile, ezungezwe insimbi engagqwali, ngakho-ke akumele ukhathazeke ngokuqhekeka komthelela.
Isibambo segabha nesivalo sengilazi zombili zenziwe ngokhuni ukuze zikwazi ukufakwa kangcono futhi zinobungani nemvelo.
10. 304. Umpheki Wenhlama Yensimbi Engagqwali
Izinto zensimbi engagqwali ezi-3 eziphansi ziqinisekisa ukuthi azikho izikeshi nemililo.
Ngesivalo sengilazi esiqinile, ukumelana nokushisa okuhle, ngisho nokusabalalisa ukushisa.
Impahla yebhodwe lensimbi engagqwali engu-3-phansi iqinisekisa ukuthi ngeke ishise futhi ishise njengeminye imikhiqizo yebhodwe lensimbi engenasici engu-1-phansi.
Ikakhulukazi, inhlama isiza ukumunca ukushisa ngokushesha futhi isabalalise ukushisa ngokulinganayo, ikugcinele isikhathi.
Esinye isici esikahle ukuthi ayinamatheli noma ayishisi inhlama ukuze ukwazi ukuyishisa kabusha izikhathi eziningi.
Ngaphezu komsebenzi wokuxubha ufulawa, ungasebenzisa inhlama ukupheka, ukupheka ukudla okuncane kwengane yakho lapho ifunda ukudla iphalishi, ukudla irayisi …
Ngenhla kukhona uhlu lwemikhiqizo engu-10 ehamba phambili yokupheka kwempushana yezingane namuhla. Ngethemba ukuthi izihloko ezimbalwa zizoba iziphakamiso eziwusizo kuwe. Uma udinga ukuxoxa, hlaziya, sicela usebenzise isigaba sokuphawula esingezansi.
Xem Thêm Các mẹ đừng bỏ qua bài viết này | Muasalebang